Ọhụụ njem nlegharị anya nke New Hawaii bụ igbu onwe onye na akụ na ụba, mana ọ bụghị pono ka 'ikwu okwu'
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Ọhụụ njem nlegharị anya nke New Hawaii bụ igbu onwe onye na akụ na ụba, mana ọ bụghị pono ka 'ikwu okwu'
Na-agbasa News Travel • omenala • Editorial • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Chefuo nsogbu COVID-19, dekọọ ọnwụ COVID na ọnụ ọgụgụ na Hawaii. Chefue ndị bịarutere njem nlegharị anya nke gbagoro n'izu abụọ gara aga wee laghachi ikpere ya ugbu a.
Mkparịta ụka kachasị mkpa maka ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii bụ otu esi akụda njem na nrọ maka ụdị ndụ Hawaii nke na -adigide ruo ọtụtụ iri afọ. Enwere ọnwụ ọnwụ maka njem nlegharị anya na Aloha Steeti?
Ọ bụ ezie na bọọdụ njem nlegharị anya n'ọtụtụ mpaghara na United States na ụwa na -achọsi ike ịchọta ụzọ ịnabata ndị ọbịa ọzọ, kwado ụlọ ọrụ ahụ, ikike nlegharị anya na Hawaii yiri ka ọ na -eche ụzọ ga -esi kụda ngalaba a kama.
Ọ nwere ike ọ gaghị adị ka nke a Ndị Njem Nleta Hawaii is Ụlọ ọrụ gọọmentị nke ndị na -atụ ụtụ isi Hawaii na -ahụ maka nlekọta ahụike na nkwalite nke njem njem na njem njem Hawawa.
Njem nleta bụ ụlọ ọrụ kacha ibu na Hawaii. Imirikiti nde mmadụ 1.6 bi na steeti iri ise nke US na -adabere na ụlọ ọrụ ndị ọbịa ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla.
Kemgbe Septemba 9, 2020, nkwukọrịta niile kwụsịrị na HTA. Na Septemba 9 bụ ụbọchị Maazị John de Fries ghọrọ onye isi nke ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii.
Kemgbe Septemba 9, 2020, enweghị ntuziaka, enweghị nkwupụta dị mkpa gbasara COVID na njem. Ọtụtụ nde ego ndị na -akwụ ụtụ isi, HTA enwetaghị nsogbu ahụ n'aha steeti Hawaii na ndị ya.
Ekwentị na HTA nọ na -ada ụda kemgbe Machị 2020, na -enweghị onye ọ bụla ga -agwa ya okwu. Akwụkwọ a enweghị ike ịgwa Mr. de Fries okwu.
Maazị de Fries abịaghị na nnọkọ mgbasa ozi otu ugboro, kwuru okwu ọ bụla ga -enyere aka ma gbaa ndị ọbịa ume, ewezuga iwepụta ọnụ ọgụgụ na ime ọkwa iji mee ka ndị ọbịa daa mba.
HTA ghọrọ ụlọ ọrụ dị anya ebe ndị mmadụ na-arọ nrọ maka ọdịbendị Hawaii, ụwa nne, na ịlụ ọgụ maka njem nlegharị anya mgbe ụfọdụ enweghị njem.
Na-ekwu maka nsogbu gburugburu ebe obibi, njem nlegharị anya, Hawaiian, na njem nlegharị anya bụ ihe dị oke mkpa n'oge oge niile. Ikekwe HTA nwere ike ọ gaghị achọpụta. Anyị na -aga njem mberede kacha njọ njem na njem nlegharị anya hụtụrụla.
eTurboNews erutela ndị nwere oke na Hawaii, gụnyere otu ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelsụ, ụlọ nri, ụlọ ahịa. Nkwupụta, ma ọ bụrụ na ọ dị naanị na ndekọ. Ọ dịghị onye chọrọ ikwu ihe ọ bụla. Ekwula okwu na -esi ísì!
Mufi Hannemann bụ onye ugbu a Pbi & CEO nke Ltù Ụlọ Mgbakọ na Njem Nleta Hawaii. Ọ rụrụ ọrụ dị ka onye isi obodo 12 nke City & County nke Honolulu, obodo 13th kachasị na United States. Maazị Hannemann alaghachighị oku ọ bụla, ozi ịntanetị ma ọ bụ ozi mgbasa ozi ọhaneze ruo mgbe COVID-19 bidoro
Ekwula okwu na -esi isi!
Nke a bụ ụzọ Hawaii!
Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Hawaii anọwo na -arụsi ọrụ ike ma na -eme nnukwu ọganiihu na Makara Kuu Okwu ụlọ.
Nke a bụ ihe Maazi de Fries kwuru gbasara Malam Kuu:
Atụgharịrị, “ilekọta ụlọ m hụrụ n'anya” bụ nkwenye visceral maka mụ onwe m; ebe ọ na -ekweta ikike ebumpụta ụwa nke mmadụ nwere inwe mmetụta na ọ gbanyere mkpọrọgwụ na ọrụ maka ebe ha si ma ọ bụ ebe ha bi ma kpọọ ụlọ.
N'ịbụ onye ọrịa na -efe efe zuru ụwa ọnụ na ndakpọ akụ na ụba, Hawaiʻi na -eche ọtụtụ ihe ịma aka siri ike - n'etiti ha, ịmalitegharị ụlọ ọrụ njem anyị, n'oge enwere ike inwe oke oke na -arịwanye elu na mpaghara anyị na steeti anyị niile.
Otú ọ dị, a na -ahụ ihe na -enwu enwu na ntachi obi na imepụta ihe nke ndị ndu Hawaii na mpaghara ọha na nke onwe; ana m eji nkwanye ugwu amata ndị nwanne nna, ndị nna nna, nne na nna, kūpuna, ndị ntorobịa, ndị nkuzi, ndị nkuzi, ndị ozi, wdg-ndị nọ n'ahịrị ihu kwa ụbọchị na-achọ ngwọta ozugbo na etiti, maka ezinụlọ ha, agbata obi, ụlọ akwụkwọ, ụka, obere ụlọ ọrụ, ndị na-abụghị uru, na ụlọ ọrụ. N'ụzọ bụ isi, omume nnwere onwe ndị a na -eme kwa ụbọchị site na Polihale, Kauaʻi ruo Kumukahi Point na agwaetiti Hawai'i niile na -etinye mmụọ na ihe dị mkpa nke Mālama Kuʻu Home - n'ihi na agbanyeghị agbụrụ anyị, ụkpụrụ ntọala nke "ilekọta ụlọ m hụrụ n'anya" agbakwunyere n'ime mmadụ anyị na DNA mkpokọta.
Ụzọ Hawai'i ga-esi gbakee akụ na ụba na ọdịmma obodo ga-achọ ọkwa nlebara anya na-enweghị atụ, imekọ ihe ọnụ, imekọ ihe ọnụ, nhazi, na otu onye isi otu dị n'otu n'akụkụ niile.
Ọ bụ ihe nwute, mkparịta ụka a dị mkpa, ọmụmụ gosipụtara nke ọma, vidiyo dị mkpirikpi, na ihe ngosi agaghị edozi nsogbu njem nlegharị anya COVID-19 maka steeti. Ọdịmma nke ndị bi, gụnyere ọtụtụ ndị na -enweghị ebe obibi, okwu ọdịmma, na ndị ọzọ na -adabere na ego nke ụlọ ọrụ njem na ndị njem na -ewepụta.
Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii ekwuputala ịmaliteghachi Kukulu Ola na Aloha Mmemme Aina 15 September 2021
Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii (HTA) ekwuputala na ọ maliteghachiri Kukulu Ola ya na Aloha Mmemme Aina na ịchọ atụmatụ n'aka ndị obodo. HTA ewepụtala arịrịọ abụọ maka atụmatụ (RFPs) iji nye nkwado maka ndị otu ruru eru na mmemme ga -eme ka ọdịbendị Hawaii wee chekwaa akụ sitere n'okike na 2022.
HTA na-ebipụta atụmatụ njikwa njem nlegharị anya nke obodo maka Oahu, 31 Ọgọst 2021
Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii (HTA) ebipụtala atụmatụ 2021-2024 Oahu Destination Management Action (DMAP), akwụkwọ ntuziaka iji wughachi, kọwaa ma tọgharịa ntụzịaka njem na Oahu. Atụmatụ dabere na obodo bụ akụkụ nke ọrụ HTA na-aga n'ụlọ Malama Kuu (na-elekọta ụlọ m hụrụ n'anya) yana mbọ ya na-aga n'ihu iji jikwaa njem nlegharị anya n'ụdị mmegharị.
Gọvanọ Hawaii David Ige na-agba ndị bi na ndị ọbịa ume ka ha gaa njem mkpuchi na-adịghị mkpa
Gov. David Ige taa na-akpọku ndị bi na Hawaii na ndị ọbịa ka ha gbuo oge njem niile na-adịghị mkpa site na njedebe nke Ọktoba 2021 n'ihi ọrịa na-adịbeghị anya, ngwa ngwa na ikpe COVID-19 nke na-ebubata ụlọ ọrụ nlekọta ahụike steeti na akụrụngwa ya ugbu a.
Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii (HTA) kwupụtara taa ihe dị mkpa ya ka ọ bụrụ nzukọ njikwa njikwa dị irè na nkwalite nke ndị isi abụọ ga-enyere aka duzie atụmatụ ndị akọwapụtara na atụmatụ atụmatụ 2020-2025 nke HTA.
Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii na -ekwupụta nhazi ha na njikwa ebe njedebe gụnyere nkwalite ọchịchị abụọ Julaị 26, 2021
HTA ahazigharịala usoro ya na arụmọrụ ya nke ọma iji kwado ebumnuche nke Malama Kuu Home (ilekọta ụlọ m hụrụ n'anya) site na ụkpụrụ nke njem nlegharị anya. HTA na -agba mbọ inye obodo ikike inwe olu ka ukwuu na ọdịnihu ndị njem, na -ekwusi ike na iweghachi gburugburu, na -eme omenala Hawaii, na -amata ọdịbendị dị iche iche nke Hawaii, na ịkwado nsonaazụ akụ na ụba dị mkpa.
Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii na -akwado mmemme iji belata mmetụta ndị ọbịa na ndagwurugwu Pololu na agwaetiti Hawaii, Julaị 9, 2021.
Ndagwurugwu Pololu bụ mpaghara dị ebube na akụkọ ihe mere eme na North Kohala na agwaetiti Hawaii. N’oge na -adịbeghị anya, enwere ndị na -eleta Pololu Lookout, Trail, na ụsọ oké osimiri na -abawanye ngwa ngwa, a na -enwekwa mkpa na -arịwanye elu iji belata mmetụta ọ na -emetụta obodo na akụ sitere n’okike na ọdịbendị.
Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii na -arụ ọrụ ibelata mmetụta onye ọbịa n'okporo ụzọ gaa Hana, Julaị 8, 2021
- Okporo ụzọ mara mma nke na -aga Hana, nke a na -akpọ Hana Highway, bụ otu n'ime isi ihe na -amasị ndị ọbịa na Maui, nke butere mkpọchi okporo ụzọ butere akụkụ ya site na ebe ndị na -adọba ụgbọala na -adịghị mma na ndị na -agafe agafe na -agafe n'okporo ụzọ. Iji nyere aka belata ọnọdụ maka ndị bi na Hana, ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii (HTA) na -aga n'ihu na -arụkọ ọrụ na ndị isi Maui County na ụlọ ọrụ steeti ndị ọzọ, ma na -adụkwa ndị ọbịa ọdụ ka ha sonye na njem site na ụlọ ọrụ njem enyere ikike kama ịkwọ ụgbọala n'onwe ha ma ọ bụ na -eleta mpaghara ndị ọzọ na Maui.
Ndị na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Hawaii na-akwado Mgbasa Mgbasa Ememme Merrie Monarch na Pop-Up Makeke, Julaị 1, 2021
- Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii (HTA) nwere mpako ịkwado mgbasa ozi nke 58th Ememe Monarch nke Kwa Afọ na Oge 3 nke Mmapụta mmapụta nke a ga -agbasa n'oge ememme ahụ. Nke a bụ 11th afọ nke HTA bụ onye nkwado emume Monrie Monarch. Omenala Hawaii bụ otu n'ime ogidi anọ nke HTA n'ime ya Atụmatụ Atụmatụ 2020-2025, nke a sụgharịkwara n'ime ya Olelo Hawaii.
HTA weputara nsonaazụ sitere na nyocha nke mmetụta afọ 2021, June 24,201
Ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii (HTA) wepụtara nsonaazụ nyocha mmiri mmiri nke afọ 2021 n'oge nzukọ ndị isi oche June nke nzukọ a taa. Nnyocha ahụ chọpụtara na ọ bụ ezie na ọtụtụ na -eche maka uto ụlọ ọrụ ndị ọbịa, ọtụtụ ndị bi na Hawaii kwenyere na njem nlegharị anya bara uru maka ụlọ ọrụ a.
Ndị Njem Nleta Hawaii na -ebido mkpọsa Malama Hawaii Mmụta, June 1, 2021
Hawaii na -akpọ ndị njem ka ha hụ agwaetiti Hawaii na ọkwa miri emi nke nwere nkwanye ugwu ka ukwuu na ijikọ na ọdịbendị anyị, ịlaghachi azụ na ebe ịchekwa ya maka ọdịnihu, mgbe ị na -agbaso usoro ahụike ahụike. Nke ahụ bụ ozi dị n'azụ usoro vidiyo na -emetụ n'ahụ na nkuzi a na -akpọ ndị ọbịa tupu ha abịarute Hawaii. Ọ bụ akụkụ nke mkpọsa mgbasa ozi Malama Hawaii, nke ewepụtara n'oge na -adịbeghị anya site na mmekorita dị n'etiti Hawaii Tourism Authority (HTA) na Hawaii Visitors and Convention Bureau (HVCB).
Kọmịshọna Njem Nleta Hawaii na -ahọrọ George Kam ka ọ bụrụ onye isi oche, Eprel 30,2021
Ndị isi oche ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii (HTA) họpụtara George Kam ka ọ bụrụ oche ọhụrụ ya n'oge ụnyaahụ nzukọ ọgbakọ kwa ọnwa. Ọ rụburu ọrụ dị ka osote onye isi oche ya. Kam bụ onye ndu obodo na -arụsi ọrụ ike, ọ bụkwa onye bụbu onye isi na ụlọ ọrụ sọfụ.
“Anyị nọ n'oge 'huliau' ma ọ bụ mgbanwe mgbanwe. Nke a bụ oge anyị ga -achọta ngwọta maka onye njem pono nke na -ahazi ohere njem na ihe ịma aka ọ na -ewetara obodo anyị. Njem nlegharị anya nwere ike bụrụ ihe mkpali iji meziwanye ndụ mmadụ niile nke Hawaii. Ịchọta nguzozi bụ ihu agụba, obosara nke ahịhịa pili, ”Kam kwuru. "Ana m atụ anya iso ndị obodo, ndị isi anyị ahọpụtara, ndị otu HTA na bọọdụ HTA chọta nguzozi a."
HTA na -aza ụdị HB862 kachasị ọhụrụ, Eprel 9, 2021
John De Fries, onye isi ala na onye isi nke Hawaii Tourism Authority (HTA), wepụtara nkwupụta na-eso ndị Kọmitii Sineti Hawaii n'ụzọ na ụzọ na azụmaahịa na nchekwa ndị ahịa maka iji eriri afọ gara aga wee dochie mmegharị iji nyefee ụgwọ. na -agbanwe n'ụzọ dị egwu ka ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Hawai'i ga -anọchite anya steeti na mbọ ya na ndị obodo imekọ ihe na ịtọgharị njem nlegharị anya n'ụdị mmegharị.
HTA na-ebipụta Atụmatụ Njikwa njem nlegharị anya nke obodo maka agwaetiti Hawaii, Eprel 1, 2021
Hawaii Tourism Authority (HTA) ebipụtawo 2021-2023 Atụmatụ Nhazi Njikwa Ebe Nweta Hawaii Island (DMAP). Ọ bụ akụkụ nke ọhụụ atụmatụ HTA na mbọ na -aga n'ihu ijikwa njem nlegharị anya n'ụzọ dị mkpa ma na -agbanwe agbanwe. Ndị bi na agwaetiti Hawai'i mepụtara ya, yana mmekorita ya na County Hawaii na oflọ Ọrụ Ndị ọbịa nke Island (IHVB). DMAP na -eje ozi dị ka onye ndu iji wughachi, kọwaa ma tọgharịa ntụzịaka njem na agwaetiti Hawaii. Ọ na -akọwapụta mpaghara mkpa yana ihe ngwọta maka ịkwalite ndụ ndị bi na ịkwalite ahụmịhe onye ọbịa.
HTA na-ebipụta Atụmatụ Njikwa njem nlegharị anya nke obodo maka Maui Nui, Machị 4, 2021
“Otuto niile dịịrị ndị Lanai, Molokai na Maui bụ ndị tinyere onwe ha na usoro DMAP ma dị njikere ihu nsogbu ndị siri ike, nabata echiche dị iche iche, nyochaa echiche ọhụrụ ma chọpụta ihe ndị ka mkpa. Usoro DMAP na -enye usoro imekọ ihe n'ime nke ndị sonyere na -eji mmụọ nsọ 'malama' - ilekọta, zụlite ma chekwaa ebe na ọdịnala ha kacha amasị, "John De Fries, onye isi oche na onye isi HTA kwuru.
HTA na-ebipụta Atụmatụ Njikwa njem nlegharị anya nke obodo maka Kauai, Febụwarị 5, 2021
Hawaii Tourism Authority (HTA) ebipụtawo 2021-2023 Kauai Destination Management Plan (DMAP). Ọ bụ akụkụ nke ọhụụ atụmatụ HTA na mbọ na -aga n'ihu ijikwa njem nlegharị anya n'ụzọ dị mkpa ma na -agbanwe agbanwe. Ndị bi na Kauai mepụtara ya, yana mmekorita ya na County Kauai na Kauai Visitors Bureau, DMAP na -eje ozi dị ka onye ndu iji wughachi, kọwaa ma tọgharịa ntụzịaka njem na agwaetiti Garden. Ọ na -akọwapụta mpaghara mkpa yana ihe ngwọta maka ịkwalite ndụ ndị bi na ịkwalite ahụmịhe onye ọbịa.
Atụmatụ dabere na obodo na-elekwasị anya n'omume ndị isi obodo, ụlọ ọrụ ndị ọbịa na mpaghara ndị ọzọ chere na ọ dị mkpa n'ime afọ atọ. Ogidi anọ na -emekọrịta ihe nke HTA's Strategic Plan haziri ihe ndị a.